ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न सांसदलाई ध,म्की !
Homeराष्ट्रिय खबरओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्न सांसदलाई ध,म्की !
काठमाण्डौ, वैशाख १९ । सत्तारुढ दल नेकपाकी केन्द्रिय सदस्य गौरी ओलीले सांसदलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर नगरे जे पनि हुन सक्ने ध,म्की दिएको खुलासा भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर नगरै जे पनि हुन सक्ने भन्दै ओलीले शारदा भट्टलाई ध,म्की दिएको खुलासा भएको हो । शुक्रबार राष्ट्रियसभा सदस्य भट्टलाई प्रधानमन्त्री ओली निकट केन्द्रीय सदस्य ओलीले यस्तो ध,म्की दिएकी हुन् । गौरीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीभित्रैबाट नि,काल्न खोजेको भन्दै यस्तो बेलामा सहयोग गर्न दबाब दिएको भट्टले बताइन् ।
पत्रकार ऋषि धमलासँगको टेलिफोन कुराकानीमा भट्टले गौरीले भनेको कुरा वेलिविस्तार लगाउँदै बहानावाजी नगर्नुस् बालुवाटार तुरुन्त पुगेर ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुस् भनेर द,बाब दिएको बताइन् । भट्टले अहिले हस्ताक्षर अभियानमा आफू नलाग्ने बताउँदा गौरीले तपाईं प्रधानमन्त्रीसँग ट,क्कर लिने ? भनेर प्रश्न गरेकी थिइन् । गौरीजीले ‘नेपालमा जे पनि हुनसक्छ, तपाईं नराम्रोसँग फ,स्न सक्नुहुन्छ ।’ समेत भनेको भट्टले बताइन् ।
ललितपुरको लुभुमा बस्दै आएका भट्टले भनिन्– गौरीजीले वालुवाटार किन नजानुभएको ? सबैले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसके, तपाइले किन नगर्नुभएको ? भनेर दबाब दिनुभयो ।
नेकपाकी सांसद भट्ट कैलालीकी हुन् । अहिले ललितपुरको लुभुमा बस्दै आएको जानकारी दिइन् । पछिल्ला दिनमा नेकपाभित्र विवाद चु,लिदै गएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसदबा बहुमत देखाउन हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन् ।-रिपोटर्स नेपालबाट
मलाई एकदिनको लागि अर्थमन्त्री बनाउनुस्, देशको अर्थतन्त्रको कायापलट गर्छु – ज्ञानेन्द्र शाही (भिडियो सहित)
बालुवाटारमा प्रचण्ड र माधवलाई गा,ली गर्दै ओली पक्षको श,क्ति प्र,दर्शन
काठमाण्डौं, १७ वैशाख । नेकपाभित्रको वि,वाद उ,त्कर्षमा पुगेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्षले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरेको छ । ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पु¥याउने प्रयासस्वरुप हस्ताक्षर अभियान था,ल्न लगाएका हुन् । हस्ताक्षरकर्ता ओली पक्षीय सांसदहरु प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमै भे,ला भएका थिए । प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षले पार्टी […]
ओलीकै अनुहार हेरेरै जनताले बहुमत दिएका हुन्
नारायण गाउँले, ओलीकै अनुहार हेरेर जनताले बहुमत दिएका हुन् भन्ने तर्क सत्य हो । तर यो बहुमत दुई वर्षभित्रै बेजिंग-काठमाडौं चल्ने चुच्चे रेलका लागि हो । दुई वर्षभित्र घरघरमा पाइपबाट आउने ग्यासका लागि हो । दुई वर्षभित्र उत्तरतिर सातवटा नाका खोल्नका लागि हो । दुई वर्षभित्र हावाबाट बिजुली […]
tadalafil5mg – liquid tadalafil tadalafil liquid
buy finasteride – http://finasteridepls.com/ compare propecia prices uk
celebrities on propecia – http://propechl.com/ stop taking propecia for 10 days
tadalafil 20 mg – http://xtadalafilp.com/ tadalafil online pharmacy
Qhsbhh – http://virviaga.com/ buy viagra canada
Surdkw – roman sildenafil Xgzziy rzzrgb
Brdbhp – furosempi.com Rkefoc hngytm
5mg Buy Propecia cialis online no prescription